May 9, 2021 - Achawlaymyar
ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့မှန်း သတိမရတော့တဲ့ ဇနီးအတွက် ဒုတိယမင်္ဂလာပွဲကို စီစဉ်ပေးခဲ့တဲ့ ခင်ပွန်း
May 9, 2021 by Achawlaymyar
လူတိုင်းအတွက် စစ်မှန်တဲ့ လက်ထပ်ခြင်းက သူတို့ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မှာ သတို့သမီး၊ သတို့သား၊ မိသားစုဆွေမျိုး နဲ့ ရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ စုံစုံလင်လင်ပါဝင်မှသာ လက်ထပ်ယူချင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနေ့တွေမှာဆိုသတို့သား၊ သတို့သမီးတွေက သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ လူတွေနဲ့ အခြားသောသူတွေအတွက် သူတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို ဝေမျှပေးကြပါတယ်။ လက်ထပ်ယူခြင်းဟာ လူတွေတွက် တစ်သက်မှာတခါသာ ကြုံတွေ့ရတာကြောင့် မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ကို မကြာခဏ ပြန်ပြီးခံစားချင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ထိမ်းမြှားမင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တဲ့နေ့ကို မမှတ်မိတော့တဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးမှာပါ Justice နဲ့ Jeremy Stamper ဟာ ကျောင်းသားဘဝအသက်10နှစ်အရွယ်မှာ ဆုံတွေ့ခဲ့ကြတာပါ။ သူတို့တွေ အချိန်အနည်းငယ်သာတွဲကြပြီး အဲ့ဒီနောက် သြဂုတ်လ 1ရက်နေ့မှာ လက်ထပ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ Honeymoon ခရီးလည်းဖြစ်တဲ့ Smoky တောင်မှာ သွားရောက် မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်ထပ်ပြီး 19ရက်နေ့အတွင်းမှာဘဲ Jeremyက … Read more
သားကြီးမယားကြီးရှိရဲ့သားနဲ့Facebookပေါ်တတ် ရည်းစားထားနေကြသော ချီးထုပ်များကိုဒဲ့ပြောပါတယ်
သားကြီးမယားကြီးရှိရဲ့သားနဲ့Facebookပေါ်တတ် ရည်းစားထားနေကြသော ချီးထုပ်များကိုဒဲ့ပြောပါတယ် သားကြီးမယားကြီးရှိရဲ့သားနဲ့Facebookပေါ်တတ် ရည်းစားထားနေကြသော ချီးထုပ်များကိုဒဲ့ပြောပါတယ်၊ ငါ့များလားမသိဘူးလို့မတွေးပါနဲ့ခင်ဗျားကို ပြောတယ်လို့ပဲ မှတ်ပါ ။ မနက်လင်းတာနဲ့ ဖုန်းကောက်ကိုင် … မောနင်းချစ် မောနင်းသဲလေး ဘာလုပ်။ အိမ်က မိန်းမ ချက်စရာ ဆန်ရှိရဲ့လားကျ မမေးဘူး။ ညက ကိုကို့ကို အိမ်မက်ထဲ ထည့်မက်ရဲ့လားလုပ် ။ အိမ်က မိန်းမညက ကလေးဂျီလို ့တစ်ညလုံး မအိပ်လိုက် ရတာကျ မသနားဘူး ချစ်ကလေး နေမကောင်းဘူးလား ဘာစားထားလဲ … ဆေးကောသောက်ပြီးပြီလား မသက်သာရင် ဆေးခန်း လိုက်ပြပေး မယ်နော် ဘာမှ စိတ်မပူနဲ့ ကိုကိုရှိတယ်။ အိမ်က မိန်းမနေမကောင် းဖြစ်လို့ ဆေးသောက် ပီးပီလား မေးဖော် မရဘူး သက်သာလား နည်းနည်းလေးမှမေးဖော်မရဘူး။ … Read more
ညအိပ္ခ်ိန္မွာ ဘရာဇီယာခၽြတ္အိပ္သင့္သလား ? မိန္းခေလးတိုင္းကို ဖတ္ေစခ်င္ပါတယ္
သင္ညအိပ္ရင္ ဘယ္ဘတ္ကို ေစာင္းအိပ္တက္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ ဆိုရင္ေတာ့ ထီေပါက္တာထက္ ပိုၿပီးတန္ဖိုးရွိသြားပါၿပီ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုေမးရသလဲဆိုေတာ့ သင္ရဲ့အိပ္စက္ပုံဟာ သင္ရဲ့စိတ္နဲ႔ကိုယ္ က်န္းမာေရးအတြက္ အရမ္းကိုအေရးတႀကီး ပတ္သတ္ေနလို႔ပါပဲ အကယ္၍ သင္အေနနဲ႔ ဘယ္ဘက္ကိုေစာင္းအိပ္ေလ့မရွိရင္ေတာ့ အခုေဖာ္ျပသြားမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြကို အဆုံးထိဖတ္ၾကည့္ရင္း ဘယ္ဘက္ကိုေစာင္းအိပ္ဖို႔ သင္ႀကိဳးစားလာပါလိမ့္မယ္။ခႏၶာကိုယ္ကို ဘယ္ဘက္သို႔ေစာင္းအိပ္ျခင္းက ခႏၶာကိုယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ အဆိပ္အေတက္ေတြနဲ႔ မလိုလားအပ္တဲ့ အျခားေသာအရာဝထၱဳေတြကို ခႏၶာကိုယ္ကေန ဖယ္ရွားသြားေအာင္ ကူညီေပးနိုင္လို႔ပါပဲေနာ္။ ဒီလို ခႏၶာကိုယ္ထဲက အညစ္အေၾကးေတြသာမက ဦးေႏွာက္ထဲက ဓာတုအညစ္အေၾကးေတြကိုလည္း ဘယ္ဘက္ေစာင္းအိပ္ျခင္းျဖင့္ ဖယ္ရွားေပးနိုင္ပါတယ္။သင့္ဆီမွာ ႏွလုံးျပသာနာရွိေနမယ္ဆိုရင္ ဘယ္ဘက္ကိုေစာင္းအိပ္ျခင္းက သင့္ကိုကူညီေပးနိုင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဆိုေတာ့ ဘယ္ဘက္ကိုေစာင္းအိပ္ျခင္းက ႏွလုံးေသြးလည္ပတ္မႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစနိုင္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ရင္ပူျခင္းေဝဒနာ ခံစားေနရသူေတြအေနနဲ႔လည္း ဘယ္ဘက္ကိုေစာင္းအိပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ညာဘက္ကိုေစာင္းအိပ္ျခင္းက ဒီေဝဒနာကို ပိုမိုဆိုးရႊားေစနိုင္ၿပီး ဘယ္ဘက္ကို ဆယ္မိနစ္ခန႔္ေလာက္ ေစာင္းအိပ္လိုက္႐ုံနဲ႔တင္ … Read more
2021 ခုနှစ်တနင်္လာသားသမီးများ တစ်နှစ်စာဟောစာတမ်း
တနင်္လာသားသမီးတို့သည် 2021ခုမှာအဘက်ဘက်က အဆင်ပြေကံကောင်းနေတတ်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်း ဖြစ်ပါက ရာထူးတိုးခြင်း၊နေရာကောင်းရခြင်းတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ငွေကြေးအစုလိုက်ဝင်တတ်ပါတယ်။ အကျိုးတူ အစုရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရတတ်သည်။ ရလဒ်လဲကောင်းပါလိမ့်မယ်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း စိတ်အလောကြီး စွာ လုပ်ကိုင်ခြင်းများ ရှောင်ပါ။တစ်ခုဆိုးတာက မိမိထက် ဉာဏ်ရည်၊လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ညံ့သူနှင့်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ရတတ်သည်။ ငွေကြေးကိစ္စများ၊ ထီး၊ ဖိနပ်၊ အထည်အလိပ် ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ ဖြန့်ချီခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အပိုပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်ရေး၊ အစုရှယ်ယာဝင်ခြင်း၊ ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ အလှကုန် လုပ်ငန်း၊ ပရိဘောဂလုပ်ငန်း၊ ယာဉ်ကားရောင်းဝယ်ရေးနှင့် အဖျော်ယမကာလုပ်ငန်းများ၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း အားကောင်း မည်။ လုပ်ငန်းခွင်တိုးချဲ့ရန် ဆန္ဒရှိသော်လည်း အနှောက် အယှက်များ အတိုက်အခံများရင်ဆိုင်ရပြီးမှ ချဲ့ထွင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ကံကောင်းနေတာက ဒီနှစ်ဟာတနင်္လာသားသမီး တွေအတွက် ပျော်စရာ၊စိတ်ချမ်းသာစရာ အလွန်များပါတယ်။ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုများ လွန်စွာမှနည်းပါးတဲ့ နှစ်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ … Read more
ဇာတ္ေတာ္ထဲက မိန္းမပ်က္ အဂၤါရပ္ (၂၅)ရပ္ ျပည့္တန္ဆာတူတဲ့ မိန္းမဆိုတာ.
ယောကျ်ားများ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ရုပ်မရင့်အောင် ဒါတွေရှောင်ပါ
အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ အိုမင်းရင့်ရော်နေတဲ့ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်မျိုး လူတိုင်းလိုချင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ယောက်ျားလေးအများစုက အသားအရေထိန်းသိမ်းခြင်းမှာအားနည်းတဲ့အတွက် အမျိုးသမီးတွေထက်စာရင် ရုပ်ရင့်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းပိုများသလို အခုပြောပြမယ့်အရာတွေကလည်း ရုပ်ရင့်စေတာကြောင့် သတိထားရှောင်ကြဉ်ဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ (၁) စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း businessman having bad headache စိတ်ဖိစီးမှုများနေချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်က cortisol လို့ခေါ်တဲ့ ဟော်မုန်းအချို့ကိုထုတ်လွှတ်ပေးပြီး ၎င်းဟော်မုန်းဟာ အရေပြားထဲက အဆီတွေပိုထွက်လာစေပါတယ်။ အရေပြားမှာအဆီပိုတွေအများကြီးထွက်လာခြင်းက အရေပြားပေါ်ရှိမွှေးညှင်းပေါက်လေးတွေမှာ အညစ်အကြေးနှင့် ဆဲလ်သေများ ပိတ်စေစို့ပြီး ဝက်ခြံနဲ့အသားအရေပျက်စီးခြင်းတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ (၂) အချိုလွန်ကဲစွာစားသုံးခြင်း Man Eating Sweets အချိုလွန်ကဲတဲ့အစားအစာတွေက ရုပ်ရင့်စေတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ သကြားဓာတ်ဟာ ကော်လာဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အချိုဓာတ်လွန်ကဲတဲ့အစားအစာတွေ အလွန်အကျွံစားသုံးပါက အရေပြားပေါ်မှာ အမဲစက်များ ၊ အရေအကြောင်းများနဲ့ အသားအရေခြောက်သွေ့မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အိုမင်းရင့်ရော်တဲ့ ရုပ်သွင်ပြင်ကို … Read more
တုံး အ တဲ့ ယောက်ျားနဲ့ ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျား
တုံး အ တဲ့ ယောက်ျားနဲ့ ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျား တုံးအတဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမကို အသာစီးရချင်တယ်…ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမအပေါ် သဘောထားကြီး အလျှော့ပေးတတ်တယ်…တုံးအတဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမရဲ့အားနည်းချက်တွေကို မြင်တိုင်း စိတ်ပျက်လွယ်တယ်… ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမရဲ့ အရည်အချင်းကို ရှာကြံ အသိအမှတ်ပြု ချီးမွမ်းတတ်တယ်…တုံးအတဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမနဲ့ အချိန်နေရာ မခွဲဘဲ ငြင်းခုံ ရန်ဖြစ်တယ်… လူပုံအလယ်မှာ မိန်းမကို မျက်နှာသာ မဲ့စေ တယ်…ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားကလူပုံအလယ်မှာ မိန်းမကို မျက်နှာသာ ရစေတယ်…ဆုံးမ ပြောဆိုစရာရှိရင် နှစ်ကိုယ်ကြားသာ ပြောဆိုတယ် … တုံးအတဲ့ ယောက်ျားက မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေက “မယားကြောက်” လို့ ခနဲ့တာကိုမခံနိုင်ဘဲ မိန်းမအပေါ်နိုင်စားပြ ချင်တယ်…ကိုယ့်ဘဝ လက်တွဲဖော်ဟာကိုယ့်မိန်းမသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ … Read more
ကလေးဘဝ ကိုပြန်လွမ်းမယ်ဆိုပြီး စဉ်းစားတော့ အချစ်ဦးကို တန်းပြန်သတိရ တာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ဘာကောင်ကြီးတွေ မှမဟုတ်ပဲ အချစ်ဦး အတွက်ဆို သူရဲကောင်းကြီး အဖြစ်ရှိ ချင်ခဲ့ကြတယ်။ ကလေးဘ ဝကိုပြန် သွားတာနဲ့ အချစ်ဦးဆိုတာ ကလည်း ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်း တစ်ခုလိုပါပဲ။အချစ်ဦးလို့ သုံးတာက Crush ဆိုတဲ့စကားကို ကလေးဘဝက မသိခဲ့သေးတာရော Crush တယ်ဆိုတာထက်ပြီးမြတ်နိုးခဲ့ မိတာကြာင့်ရောပါ ။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးနှစ်သက်ပြီး ပြန်တမ်း တကြတဲ့အဖြူ စိမ်းကျောင်းသား ဘဝမှာဆို မနက်မိုးလင်းလို့ကျောင်းရောက်တာနဲ့ ကိုယ့်အဖွဲ့လေးနဲ့ကိုယ် ကလေးတို့သဘာ ဝဆော့မယ် ကစားမယဒီလိုနဲ့အချိန်ကုန်တတ်ခဲ့ကြ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချစ်ဦးဆိုတဲ့ ကောင်မလေးက စိန်ပြေးတမ်း ကစားနေသလား ကြိုးခုန်နေသလား ဇယ်ခုပ်နေသလားဆို တာကိုလည်း စိတ်ဝင်တစား လိုက်ကြည့်ခဲ့ကြဖူး မှာပါ။ အခါအခွင့် သင့်တာနဲ့ … Read more
1111VPN ကို ပိုလိုင်း ကောင်းအောင် ပြောင်းပြီးသုံးနည်း
ရတဲ့ အချိ န်လေးမှာ အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်စေဖို့ အားလုံး သိ အောင် ဝေမျှပေးလိုက် ပါတယ် 1111 vpn ကို GBတိုးပြီးသုံးတာ ထပ်စာရင် 1111vpn team memberဝင်ထားရင် အရင်ထပ်ပိုလိုင်းကောင်းပါတယ် ဆရာ တယောက် ပြောထားတာ တွေ့လို့ လိုက်လုပ်ရင်းရသွားတာပါ လုပ် နည်းကို အောက် မှာ ဆက် ရေးပေးပါ့ မယ် 👇👇 အရင်ဆုံး1111vpnကိုconnectလုပ်ပါ connected ဖြစ်ရင် ညာ ဘက် ဒေါင့်က ဘာတန်းသုံးချောင်းကိုနိုပ်….ပြီးရင် (1)accunt ထဲဝင် (2)organizationကိုနိုပ် (organizationကိုမတွေ့ရင်) Login with cloudflare of teams ထဲ ဝင် ပြီးတော့ Iphoneလို့ရေးထည့်ပါ (andriodတွေလည်းရပါတယ်) (3)ပြီးရင် box … Read more